Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Abantu abaninzi kwihlabathi liphela bathi bayakholelwa kuMntwana oNgcwele onguYesu, yiyo loo nto ke eneendlela ezahlukeneyo zokumela uthando kunye nokholo olukuye. Apha ngezantsi kweli nqaku uza kufumana zonke iinkcukacha malunga Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu.
1 Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu
2 Iinkcukacha ezithe kratya malunga noMthandazo kuMntwana oyiNgcwele uYesu
3 Umntwana uYesu kunye neKholwa
4 Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu: Imithandazo eyahlukeneyo
4.1 Umthandazo kuMntwana oNgcwele onguThixo weXesha elinzima
4.2 Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu: Imizuzu embalwa kunye noMntwana oyiNgcwele uYesu
4.3 Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu
Umntwana oNgcwele, ungumnini we Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu Iyaziwa ngokuba luphawu olungcwele ngokugqwesa okubandakanya indawo enkulu yommandla wesizwe; umfanekiso wakhe kunye negama lakhe linxulunyaniswa neendawo ezithile, iintshukumo kunye namaxesha okwenyani kweColombia, esele inengcambu kwisigwebo sakhe esisebenzayo esithi "Ndiza kulawula."
Kwelinye icala, phakathi kwawo onke amaKatolika, ukuzinikela kuYesu Krestu kubonakaliswa ngale mifanekiso icinezela ukubandezeleka emnqamlezweni, kodwa nangona kunjalo, zimbalwa kakhulu izibongozo ezinxulumene nobuntwana bakhe; Ngokuyintloko inxulunyaniswa nokuzalwa kukaYesu, uMntwana onguThixo weManger okanye uMntwana onguThixo osezandleni zikaMama oyiNtombikazi.
Kodwa, imifanekiso ethile yoMntwana uYesu ehleli imile kwaye ukuba ingumntu okwanti inkolo iyagcinwa. Kwiindawo ezinje ngeColombia, ukholo loMntwana uYesu lwaziswa ngo-1912 ngenxa yokufika kukaJuan del Rizzo, owayengumfundisi wase-Italiya ovela kuluntu lwaseSalesian kwaye enikezela usana olunguPrague.
Lo mfanekiso nguyena owaqala iCult eBarranquilla, kodwa wathi akufika eBogotá ngo-1935, umphathi woluntu wacebisa ukuba ubizwe ngokuba "yiDivino Niño Jesús" kuba abahlali baseKarmeli babebanga amalungelo omfanekiso ngaloo ndlela Ngaphandle kwengxaki, bathathe umsebenzi wokucacisa entsha, eyile siyaziyo namhlanje kwaye yabonwa okokuqala kwiindibano zocweyo kwiziko laseBogotá.
Iinkcukacha ezithe kratya malunga Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu
Namhlanje uMntwana oNgcwele ubekwe kwimimandla eyahlukeneyo ngokweenkcubeko ezahlukeneyo; Ngokubanzi, icacisiwe kubomi bemihla ngemihla, ukulawula ukukhathalela bonke abantwana ehlabathini. Imimandla eyahlukeneyo, izikolo, amaziko ezempilo okanye iivenkile zibhaptiziwe phantsi kwegama lakhe kwaye ukongeza koku, uhlala ekhona kwiindawo zikawonke-wonke okanye kwizibingelelo zosapho, iiofisi, iivenkile zokutyela, ezemidlalo, ngaphakathi kweopera okanye kwiintengiso ezithile.
Ngokufanayo, umfanekiso woMntwana oNgcwele okanye Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu Bafakwa kwiimoto, iiteksi okanye iibhasi, zihlala zikhatshwa yiVirgen del Carmen. I-icon ikwazile ukugqitha kwinqanaba lenkolo ukuze ikwazi ukuziguqula ibe luphawu olupheleleyo lwentsingiselo esebenza ngesakhono sokudibana eluntwini.
Umntwana uYesu kunye neKholwa
Umntwana uYesu uyakwazi ukufumana intsingiselo enkulu kuwo onke amakholwa kwaye kwakhona uyitafile yosindiso ngoxinzelelo lwentlalo. Umfanekiselo wakhe uyakwazi ukuthathwa njengophawu oluzele lithemba ngaphakathi kwenyani ebukhali; kuyo unokufumana ukuphakanyiswa kwesisa kunye nokulunga.
Ukugxila ekuyekeni ubundlobongela, Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu ivelisa ukuzola kunye nobumnandi, ukongeza ekuvuseleleni ukuzola okuphunyeziweyo ngokushiya bucala ezo ziganeko ziqatha kunye nokubandezeleka okuphawulwe kwiimpawu zonqulo ezahlukeneyo.
Amakholwa ayakwazi ukuyamkela kwaye afumane ukhuseleko, uxolo kunye nokukhuseleka, kanye njengoko benokuzithemba ukuba nantoni na abayicelayo iyakuhlala inikwa. Ukuphakama kwayo kungenxa yefuthe elinamandla lokukwazi ukuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zabadlali bezentlalo ngeenxa zonke. Ayinakho ukubekelwa bucala kwalo naluphi na uhlobo kunye nemvelaphi yayo, amandla ayo amakhulu okubiza, ukuba semthethweni kunye nentsingiselo ekufumanayo kuyiguqulele kwilifa lemveli.
Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu: Imithandazo eyahlukeneyo
Emva kokuba ibali loMntwana oyiNgcwele uYesu ligcinwa engqondweni, ngumzuzu ofanelekileyo wokukwazi Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele uYesu, Okanye, yazi imithandazo eyahlukeneyo yokunikezela kuMntwana oyiNgcwele uYesu:
Umthandazo kuMntwana oNgcwele onguThixo weXesha elinzima
«Umntwana oyingcwele uYesu ndinobunzima obuwaka: ndincede. Kwiintshaba zomphefumlo: ndisindise, kwiimpazamo zam: ndikhanyisele ekuthandabuzeni nasekubandezelekeni kwam: undithuthuzele xa ndililolo: undikhaphe kwizigulo zam, undomeleze. Xa bandidelela: ndikhuthaze ezilingweni: ndikhusele ngeeyure ezinzima: ndithuthuzele ngentliziyo yoyise: ndithande ngamandla akho amakhulu: ndikhusele nasezandleni zakho xa ndiphelelwa lixesha: ndamkele. Amen.»
Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu: Imizuzu embalwa kunye noMntwana oyiNgcwele uYesu
«Ndisikelele uMntwana oyiNgcwele uYesu! Undithandazise ungayeki, susa isono kum namhlanje kwaye ngawo onke amaxesha, ukuba ndiyakhubeka, wolula isandla sakho usise ngakum. Ukuba ndiwile kalikhulu, ndiphakanyiswe kalikhulu, ukuba ndiyakulibala, awundilibali. Ukuba undishiya ngoMntwana oNgcwele, kuya kuba njani ngam? Kwiingozi zehlabathi ndincede.
Ndihlala ndifuna ukuhlala ndife phantsi kwesandla sakho, ndifuna ubomi bam bube kukuncuma, undijonge ngovelwano, ungandishiyi, Yesu wam! kwaye, ekugqibeleni, ndamkele undise ecaleni kwaKho, Mntwana oyiNgcwele uYesu, ngamana intsikelelo yakho ingahlala inathi. Amen.»
«Umntwana oyingcwele uYesu uThixo wentliziyo yam kunye nomzekelo wokuziphatha kwam, hlala kunye nam ukuze undihlukanise nobubi undenze ndifane nawe, undenze ndikhule kubulumko nobabalo phambi koThixo nabantu.
Mntwana omnandi uYesu, ndiya kuhlala ndikuthanda ngentliziyo yam yonke! Ungumntwana oNgcwele, Sikelela Umntwana Ongcwele uYesu, simamele umntwana kaThixo oyiNgcwele uYesu, Sive. Amen.»
Okokugqibela, kubalulekile ukukhankanya ukuba nanini na xa kusenziwa le mithandazo, kufuneka ube nalo lonke ukholo ukuze ngaloo ndlela uzalise uxolo nokuzola.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo kwiNkosi yeNceba.